Mookids rogadka Xal xidhaalaha - Shiinaha Ningbo Mianxuan
Xal xidhaalaha Wooden
qorshaha New Exhibition
sawir hore ee Exhibition
Golaha qasacadii Bank
Mookids rogadka Xal xidhaalaha
Features: 100% Safety wax Eco-friendly rinjiyeynta dusha aan sun Ciyaarta alaabta lagu ciyaaro ciyaarta in lagu dhiirrigeliyo si OEM caqli kid ayaa waxaa soo dhaweeyay Mookids Alaabta Co. waxa uu ku yaalaa Ningbo Chian, taas oo uu leeyahay awood sare oo ka mid ah juqraafiga, isgaarsiinta. Shirkadda Our takhasusay caruurta ciyaaro iyo waxyaabaha ilmaha. Waxaan la wadaagi arrimo wanaagsan sida wax soo saarka, qiimaha, suuq Waxaan sidoo Waxaan si daacad ah w idin siin doorashooyin ma aha oo kaliya badan iyo waqtiga dhalmada ka gaaban, laakiin sidoo kale wax soo saarka si fiican qiimo macquul ah ...
Waxyaabaha: Wood, plywood
Iyo meesha Asal ahaan: Shiinaha (Dhul)
Xirxirida: Color Box
MOQ: 1,000 qaybood
Delivery: 45 maalmood
wax 100% Eco-friendly
Safety aan sun dusha rinjiyeynta
Iska dhig alaabta lagu ciyaaro ciyaarta in lagu dhiirrigeliyo kid ee caaqil
Si OEM waxaa soo dhaweeyay
Mookids Alaabta Co. waxa uu ku yaalaa Ningbo Chian, taas oo uu leeyahay awood sare oo ka mid ah juqraafiga, isgaarsiinta.
Shirkadda Our takhasusay caruurta ciyaaro iyo waxyaabaha ilmaha. Waxaan la wadaagi arrimo wanaagsan sida wax soo saarka, qiimaha, suuq-
Waxaan idin siin doorashooyin ma aha oo kaliya badan iyo waqtiga dhalmada ka gaaban, laakiin waxyaabaha sidoo kale ka fiican qiimo macquul ah iyo sidoo kale
Waxaan si daacad ah idinku soo dhawaynaynaa inaad in ay booqdaan Shirkadda at www. mookidstoy .com iyo wada hadlaan ganacsiga, ku hayaa dhiso xiriirka ganacsi muddada dheer leh kasta oo kale.
1, alaabta lagu ciyaaro Waxbarashada: block alwaax, xujo alwaax, kids ciyaar toy, easel, alaabta lagu ciyaaro kuul, abacus, baaskiil dheelitirka, alaabta lagu ciyaaro ilmahaaga, alaabta lagu gaari, gaari alwaax, toy tareen, toy diyaarad, gantaal alwaax, alaabta lagu ciyaaro muusikada.
2, qalabka Teaching: qalabka Montessori, Froebel, iyo qalabka kale ee wax baraya.
3, Iska dhig alaabta lagu ciyaaro, alaabta lagu ciyaaro jikada, toy shaqeeyihii, alaabta lagu ciyaaro alaabta, guriga caruusada alwaax, alaabta lagu ciyaaro cuntada.
4, Preschool Furniture & garoon: carruurta sariir, miis, iyo kursi, miis, golaha wasiirada, garoon gudaha iyo dibadda iyo alaabta kale.
5, alaabta lagu ciyaaro hadiyad xayaysiis: yoyo alwaax, kendama, jiid weheliyaan alaabta lagu ciyaaro, iwm
6, ganacsiga OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa.
stamps waxbarasho Intelligent ABC xujo caadadii 3D toy DIY xujo koox ajnabi alwaax
** dheer Ganacsiga: EXW, FOB, CNF, CIF
** Dekedda Loading: Ningbo / Shanghai
** raridda: By badda, By hawada, By express
** dheer Pament: T / T 30% deposit ka hor-soo-saarka iyo 70% dheelitirka dhanka ah nuqul B / L; 100% noqosho/ L C at hortiisa; Paypal, Western Union,
** waqti Sample: qiyaastii 7-14days
**Waqtiga dirida: 40-55 maalmood
** damaanad Product: Waxaanu u balanqaadaynaa macaamiisha waxyaabaha helay aqoonteeda. Haddii kasta oo qaybo ka jabay, pls noo soo diri sawiro faahfaahsan by email, ka dibna waxaan kuu soo diri doonaa bedelo sida xaaladaha dhabta ah.
** Sida loo ilaaliyo xuquuqda sharci ka dib marka aad la shaqayso?
Saxiixa NDA, ilaalinta design hana iska iibiso si ay dadka kale; Waayo, amar weyn, waxaan sidoo kale
ku heshiiyaan in ay saxiixdo heshiis, taas oo aan keliya sameeyo alaabta ee shirkaddaada.
** ma deegaanka wax? waxaad siin kartaa wax FSC? wax Professional iyo shahaado waxaa beneficially qaaday tan iyo 2008dii Bil kasta waxaan kuu soo diririnjiga Dufcaddii gaar ah u testings SGS. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin shaybaar badbaadada alaabta noo gaar ah.
FSC la soo bandhigay ka 2010 oo la heli karo suuqa UK. Sidaas oo kale waa la heli karaa si
hesho qiimaha sare 10% ka badan commons ah.
** Ma leedahay macaamiisha qaar ka mid ah in America / Europe? Waa kuwee macaamiishu? Our macaamiisha waa adduunka oo dhan halka Europe iyo America waa mudnaanta, sida Disney,Target, Alaabta R, Hasbro ee America, Studio100, JMD, METRO, koriya IKEA ee Europe,
Waxaan mar walba ku leeyihiin xidhiidhada ganacsi iyaga la.
Previous: Xal xidhaalaha Vehicle Iyadoo Wheel
3D Kit Dhismaha Xal xidhaalaha
Xal xidhaalaha Wooden 3D
Custom Jigsaw xujooyinka
Xal xidhaalaha DIY Toy
Funny Jigsaw Xal xidhaalaha
IQ Tababarka Jigsaw Xal xidhaalaha
IQ Xal xidhaalaha Block Wooden
IQ Xal xidhaalaha Wooden
Jigsaw Xal xidhaalaha
Jigsaw xujo Board
Xal xidhaalaha Jigsaw Mini
Kids Xal xidhaalaha Game
Guddiga Xal xidhaalaha Waxbarashada Toy
xujo Qalabka Waxbarashada Hore
Game Xal xidhaalaha
Xal xidhaalaha Jigsaw
Rainbow Toy Wooden Xal xidhaalaha Jigsaw
Round Jigsaw xujooyinka
baabuurta Xal xidhaalaha Wooden Peg
Wood 3D Jigsaw Xal xidhaalaha
Wood Xal xidhaalaha
Xal xidhaalaha Block Wooden
Xal xidhaalaha Jigsaw Wooden
Xal xidhaalaha Wooden Qalabka Waxbarashada Hore
Xal xidhaalaha Wooden Toy
Vehicle Xal xidhaalaha Wooden
Wooden Xal xidhaalaha Toy Dhismaha Qalabka
Wooden Xal xidhaalaha Toy Jigsaw
Xarunta dab demiska
Ciyaar Double Game Kalluumaysiga
Cinwaankaaga: Room 2806, Block A, No. 933 Tiantong Norh Raoad, Degmada Yinzhou, Ningbo Shiinaha